Potty Training ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ - တရုတ်စက်ရုံအတွက်ရေစိုခံကြိုးမဲ့ခွေးတံခါးပေါက်များ - BEST-HOME
နေအိမ် > မူလစာမျက်နှာ > ခွေးတံခါးပေါက် > Potty Training အတွက်ရေစိုခံကြိုးမဲ့ခွေးတံခါးပေါက်များ
ကြိုးမဲ့တံခါးပေါက်၊ Potty Training အတွက်ခွေးခေါင်းလောင်းများ IP55 ရေစိုခံထိတွေ့နိုင်သောတံခါးပေါက် ၅၅ လုံးပါ ၀ င်သော ၅ ဖွဲ့အဆင့်မီးလုံးပါ ၀ င်သည်။ လက်ခံမီးနှင့် Transmitter မပါသောတံခါးပေါက်၊ Potty Training အတွက်ခွေးခေါင်းလောင်းများ IP55 ရေစိုခံတံခါးပေါက် Chime မှာ ၉၅၀ ပေနှင့် ၅၅ ဂီတပါသော ၅ ခုအသံအတိုးအကျယ် LED မီးလင်း
2.9 * 0.98In 2.2 * 0.59Inch
1အစုံ/Gift Box,၅၀pcs / ပို့ဆောင်ပုံးများ
ကြိုးမဲ့တံခါးပေါက်၊ Potty Training အတွက်ခွေးခေါင်းလောင်းများ IP55 ရေစိုခံထိတွေ့နိုင်သောတံခါးပေါက် ၅၅ လုံးပါ ၀ င်သော ၅ Volume Levels LED Flash ပါဝင်သည့် Receiver နှင့် transmitter
¥တာရှည်ရေနှင့်ရေစိုခံ - အတားအဆီးကင်းသည့်ပတ်ဝန်းကျင်တွင်လက်ခံနှင့်ထုတ်လွှင့်စက်သည်အများဆုံးထိရောက်သောအကွာအဝေးမှာ ၉၅၀ ပေအထိရောက်ရှိနိုင်သည်။ ရေစိုခံအဆင့်မှာ IP55 ဖြစ်ပြီးရေစိုခံနိုင်သည့်ရာဘာကွင်းသည်မိုးရာသီတွင်ပုံမှန်အားဖြင့်အလုပ်လုပ်နိုင်ပြီးအိမ်တွင်းနှင့်အပြင်တွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။
â၊ ¥စွမ်းအားကောင်းသောအဆင့်မြှင့်။ ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သောကော်ကပ်တိပ် - ဝါယာကြိုးမသုံးဘဲလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရန်ခွေးတံခါးပေါက်များ၊ ၎င်းကိုတံခါးသို့မဟုတ်နံရံများသို့မဟုတ်သင်လိုအပ်သည့်နေရာတိုင်းတွင်ကပ်ရန် Reusable ကော်တိပ်ကိုသုံးပါ။ ချိတ်နှင့်ကွင်းဆက်တိပ်ခွေများသည်ရိုးရှင်းလွယ်ကူသောအခွံချွတ်ထားခြင်း၊ သိုမဟုတ်၊ နံရံကိုမထိခိုက်စေဘဲဘက်ထရီကိုအလွယ်တကူအစားထိုးနိုင်သည်။
ရိုးရှင်းစွာဖြင့်ခလုတ်: ဤခွေးတံခါးပေါက်များသည်ခွေးငယ်လေး၏ဖိစီးမှုပြsolနာကိုဖြေရှင်းပေးသည်။ ခလုတ်နှိပ်စရာမလိုပါ၊ ခလုတ်ကိုထိရုံသက်သက်သာသာထိပုတ်ပါ၊ ခွေးသေးငယ်သည့်သို့မဟုတ်ကြီးမားသောခွေးများအတွက်အသုံးပြုရန်လွယ်ကူပြီး၊ သင့်ရဲ့လိုအပ်ချက်နှင့်အညီ transmitter ကို။ ကိုက်ညီသောနည်းလမ်းသည်လွယ်ကူပြီးလည်ပတ်ရန်လွယ်ကူသည်။
♥ Customizable: Has 55 first polyphonic ring tones and5levels of adjustable volume, you can choose the size of your favorite ring tones and ring tones (0-110 decibels), အစုံ to doorbell ring. not disturb mode, give users better Home experience.
•လွယ်ကူသောတပ်ဆင်မှု - Dog Doorbells ကိုဝါယာကြိုးမပါဘဲအသေးအဖွဲလေ့ကျင့်ရန်၊ တံခါးသို့မဟုတ်နံရံတွင်ကပ်ရန် 3M နှစ်ဖက်တိပ်ဖြင့်သုံးပါ။ အသုံးပြုရန်လွယ်ကူသောညွှန်ကြားချက်များနှင့်ဝက်အူလှည့်ပါဝင်သည်။
hot Tags:: Potty Training အတွက်ရေစိုခံကြိုးမဲ့ခွေးတံခါးပေါက်များ၊ တရုတ်၊ စက်ရုံ၊ ထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ၊